Asao ny namanao hilalao ny atiny ao amin'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Asao ny namanao hilalao ny atiny ao amin'ny HomePod anao
Manohy manome fampahalalana momba ny fampiasana ny HomePod sy ny interface mba hitrandrahana ny fahafahany feno izahay. Alohan'ny hanazavako izay lazaiko anao amin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra dia mila mampatsiahy anao aho fa ny HomePod Mila manana andiana fepetra ara-teknika amin'ny toerana tianao hampiasa azy io hiasa izy.
Ny zavatra voalohany dia tsy maintsy misy fifandraisana WiFi milamina satria raha tsy izany dia tsy ho afaka hiasa ary Siri, izay ati-dohan'io fahagagana io, dia mila tambajotra WiFi. Tsy afaka mizara ny tambajotran'ny iPhone miteraka WiFi isika hifandray amin'ny HomePod satria ny HomePod dia hiaraka amin'ny iPhone izay mifandray amin'ilay tambajotra WiFi iray ihany.
Amin'ny lafiny iray, ny HomePod Tsy azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny alàlan'ny Bluetooth, fanesorana ny fahafaha-mampiasa azy amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa izay tsy avy amin'ny ekosistra Apple. Ny HomePod dia miasa eo ambanin'ny protokol AirPlay.
Raha jerena ireo toerana roa ireo dia andao lazaina fa te hitondra ny HomePod amin'ny fety ankalazain'ny namana iray ianao. Ao an-trano dia misy tamba-jotra WiFi misy Internet ary noho izany ianao dia afaka mampiasa ny HomePod sy ny famandrihana anao amin'ny Apple Music mba hamelomana ny fety. Raha vantany vao tonga ianao dia mamerina ny HomePod ka rehefa manamboatra azy io indray ianao dia ataonao amin'ny tambajotra WiFi vaovao ary rehefa vita ny fizotrany Samia mankafy!
Na izany aza, misy antsipiriany kely tiako ho fantatrao ary izany dia ny mba handefasana mozika an'io HomePod io dia tsy maintsy avy amin'ny telefaoninao ... ka ... ho ianao ve no ho fety rehetra ho an'ny rehetra sa avela ho an'ny olon-kafa ny iPhone? Ity vahaolana ity dia manana vahaolana ary io no ao anaty fampiharana Casa Azonao atao ny manefy endrika ivelany izay azonao zaraina ny HomePod amin'ny ID Apple hafa mba hahafahan'ny olona mandefa mozika any aminy. Tamin'izany fomba izany raha tsy tao amin'ny fety ianao dia tao an-trano ary nanana iPhone ny olon-tianao sy ny zanakao, Amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo Apple ID ao amin'ny rindranasa Home, samy afaka hampiasa izany izy ireo noho ny protokol HomeKit.
Mba hanasana ny hafa hifehezana ny kojakoja anao, ianao sy ireo olona asainao dia tsy maintsy sonia ao amin'ny iCloud sy amin'ny fifandraisana amin'ny iOS 11.2.5 na taty aoriana. Inona koa, tsy maintsy ao an-trano ianao na manana foibe fampidirana voalamina ao an-tranonao.
Manasa ny hafa:
Kitiho ny app Home, avy eo tap
eo amin'ny zoro havia havia.
Ampidiro ny Apple ID ampiasain'ny olona amin'ny iCloud.
Press Manasa fanasana.
Ny mpandray dia hahazo fampandrenesana ao amin'ny app Home amin'ny fitaovany iOS.
Sokafy ny app Home ary tsindrio
Tsindrio ny fikirana ao an-trano.
Tsindrio OK, ary avy eo tsindrio OK.
Aorian'ny fanekena ny fanasana dia kitiho
avy eo kitiho ny anaran'ny Trano hifehy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Asao ny namanao hilalao ny atiny ao amin'ny HomePod anao
Nolavin'i Apple fa amin'ny taona 2019 dia hofoanany ny fivarotana mozika amin'ny iTunes
Swim Out dia manomboka amin'ny Mac App Store anio